Maxay Kuuriya Waqooyi u burburinaysaa goobihii tijaabada Niyuukleerka? - BBC News Somali
Kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay inay toddobaadkan bilaabeyso burburinta xaruntii tijaabada hubka Niyuukleer.
Goobta lagu burburinayo xarunta Niyuukleer ee Kuuriyada waqooyi ayaa waxaa la sheegay inay ka soo xaadiri doonaan weriyeyaal ajnabi ah, balse maxay ka dhigantahay in dal heysta niyukleyr uu si dhab ah u burburiyo?
Dhulka buuraleyda ee dhaca waqooyiga bari ee dalka Kuuriyada waqooyi waxaa ku taalo xarunta Niyuukleer ee xukuumadda Pyongyang.
Goobtan ayaa waxaa loo adeegsaday lix tijaabo oo niyukleyr ah, tan iyo sandkii 2006-da, balse Kuuriyada Waqooyi waxaa ay sheegtay in tallaabooyinka farsamo ee lagu burburinayo xaruntani la qaadi doono 23 ilaa iyi 25 bisha May.
Kuuriyada waqooyi waxaa kale oo ay sheegtay inay ka go'antahay baabi'inta hubka niyuukleyrka, waxaase ay ku hanjabtay inay ka bixi doonto wadahadalada hoggaamiyaha dalkaasi uu la yeelanayo madaxweynaha Mareykanka, Donald Trump.
Ruushka oo beeniyay in uu qarxay hubka nuyuukleerka
Xukuumadda Pyongyang ayaa horay u ballan qaadday inay albaabada isugu dhufaneyso xarunta tijaabada ee niyuukleerka,taasi oo u muuqatay mid markii hore si aad ah loo soo dhaweeyay.
Hasayeshee xukuumadda dalkaasi waxaa ay xustay in barnaamijkeeda Niyuukleer uu horumar badan sameeyay, haatan aan loo bahneyn tijaabooyin dheeraad ah.
Kuuriyada waqooyi waxaa kale oo ay sheegtay in casuumaada ay u fidisay kormerayaal ajnabi ah, Kuuriyada Koonfureed iyo weriyeyaal caalami ah ay muujineyso hufnaanta ah sida ay uga go'antahay burburinta hubka Niyuukleer.
Kormeerayaasha Qaramada Midoobay oo doonayo in guud ahaan caalamka laga baabi'iyo hubka Niyuukleer ayaa waxay soo saari doonaan qiimeyn ah in gebi ahaan ba la baabi'iyay xarunta Niyuukleer ee Kuuriyada Waqooyi.
Marka hawsha la dhameeyo, dad kormeerayaal ah ayaa isticmaali doona sawirrada dayax-gacmeedka si ay u hubiyaan in wali dhaqdhaqaaq kale oo wax lagu samaynayo uu jiro.
Waxaa lagu ogaan karaa in Kuuriyada Waqooyi ay xarumo kale oo tijaabo ay ka fureyso meelo kale.
Balse ma qarin karto xarumo aanan la ogeyn, sababtoo ah waxaa la dareemi doonaa ruxanka dhulka marka tijaabo nuyuukleer lagu sameeyo dhulka hoostiisa.
In la xiro xarumaha waa kaliya talaabada koowaad ee loo qaadayo xagga hub ka dhigista nuyuukleerka, sababtoo ah Kuuriyada Waqooyi waxa ay leedahay rugo iyo tasiilaad kala duwan oo ay naaxiso barnaamijkeedka nuyuukleerka.
Hay'adda Qaramada Midoobay ee arrimaha hubka atoomika ayaa horey u sheegtay in ay hubisay in Kuuriyada Waqooyi aysan hub ahaan u isticmaali haynin nuyuukleerka.